Shiinaha warshad lagu koriyo oo fara badan & alaab-qeybiyeyaal | Aixiang
Aqalka dhirta lagu koriyo Tani waxay leedahay faa'iidooyinka
Resistance Iska caabin dabayl xoog leh,
Resistance Iska caabin adag baraf,
Performance Waxqabadka qaabdhismeedka wanaagsan, adag oo la isku halleyn karo,
Production Wax soo saar sare ♦
♦ Caqli iyo otomaatig buuxa,
Yaree cayayaanka iyo cudurada,
Effect Saamaynta dahaadhka wanaagsan.
Gurigaan lagu koriyo wuxuu leeyahay aag ballaaran oo laba jibbaaran, wuxuu la jaan qaadi karaa nidaamyo fara badan oo ka caawiya aqalka dhirta lagu koriyo inuu gaaro wax soo saar sare, wuxuu ka dhigi karaa khudradda xilliga ka baxsan inay run noqoto!
Nidaamka hawo bixinta.Nidaamka hawo-qaadashada waxaa ku jira laba qaybood, nidaamka hawo-qaadashada dhinaca iyo hawo-qaadista ugu sarreysa.Waxaan u adeegsaneynaa duubista filimka si aan u gaarno hawo-mareenka dabiiciga ah, duubista filimka korantada iyo rolleelka filimka gacanta ah. Duubista filimka korantada ayaa aad ugu habboon aqalka dhirta lagu koriyo ee badan, laakiin waan awoodnaa iyadoo loo eegayo baahidaada inaad doorato duubista filimka.
Nidaamka hawo bixinta.Nidaamka hawo-qaadashada waxaa ku jira laba qaybood, nidaamka hawo-qaadashada dhinaca iyo hawo-qaadista ugu sarreysa.Waxaan u adeegsaneynaa duubista filimka si aan u gaarno hawo-mareenka dabiiciga ah, duubista filimka korantada iyo rolleelka filimka gacanta ah. Duubista filimka korantada ayaa aad ugu habboon aqalka dhirta lagu koriyo ee badan, laakiin waan awoodnaa iyadoo loo eegayo baahidaada inaad doorato roller.greenhouse, hadhka dibedda iyo gudaha shading-ka. Shabakadda hadhka leh waxay leedahay shabaqyo hadhay oo kala duwan, waxaa jira 35% ilaa 90% hoos u dhigista doorashadaada. Shaqada ugu weyn waa in la xannibo iftiinka qoraxda iyo hooska & qaboojinta
Kursiga keydka.Kursiga waxaa loogu talagalay xanaanada abuurka, waxaa jira sedex nooc oo kursi ah xulashadaada: keydka dhaqaajinta，keydka taagan, ebb iyo keydka socodka Cabbirka waa laga beddeli karaa
Nidaamka kululaynta. Waxaa ka mid ah kululeeyaha kululeeyaha iyo kuleylka kuleylka, qalabka kululaynta wuxuu noqon karaa gaaska, dhuxusha, biyaha kulul, iyo dhexdhexaadka bayoolojiga.
Nidaamka qaboojinta Nidaamkan waxaa ka mid ah marawaxada qiiqa iyo suufka qaboojinta. Shaqada ugu weyn ee nidaamka qaboojinta waa in la qaboojiyo.
Fan wareegga.Nidaamku wuxuu dardar gelin karaa wareegga hawada ee gudaha, wuxuu sameeyaa hawada gudaha, heerkulka, qoyaanka iyo isku-uruurinta CO2 si siman ayaa loo qaybiyaa.
Hore: Gothic glass-Po oo lagu daro aqalka dhirta lagu koriyo
Xiga: Sawirka-ilkaha Greenhouse
Guriga lagu koriyo ee kala-baxa badan